ကိုပုနဲ့ ဖြိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Gay/Lesbian » ကိုပုနဲ့ ဖြိုး
Posted by Phyo on Jun 8, 2011 in Gay/Lesbian, Short Story | 40 comments
မိုး အသည်းအသန် ရွာနေတဲ့ ညတစ်ညရဲ့ ၈ နာရီလောက်ခန့်အချိန်မှာပေါ့…
ညနေ အိမ်ကနေ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ ထွက်လာခဲ့တာ… လူကလည်း အလုပ်မှာ အဆင်မပြေတော့ စိတ်လေလေနဲ့လေ… အိမ်ကဆိုတာက တယောက်တည်းနေတဲ့ အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးကပါ… စိတ်တွေကို မွန်းကျပ်လွန်းလို့ ရေကန်ဘောင်ပေါ်ကို တက်ပြီး လေညှင်းခံမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးနဲ့ပါ
ရေကန်ဆိုတာက ရေကူးကန်သေးသေးလေး မဟုတ်ပါဘူး… စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေ ပတ်ပတ်လည် ၀န်းရံထားတဲ့ ရေကန်ကြီးပါ… ဆိုင်ကယ်ရပ်တဲ့နေရာမှာ ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်ထားခဲ့ပြီး ကန်ဘောင်မှာ လမ်းလျှောက်ဆေးလိပ်သောက်ရင်း တွေးနေခဲ့တယ် တယောက်တည်း
အချိန်ဘယ်လောက် ကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး… ဗိုက်ဆာလာလို့ ကန်ဘောင်ဘေးက ဆိုင်မှာပဲ ငါးကင်နဲ့ ထမင်းကြော် စားလိုက်တယ်… မထူးပါဘူးဆိုပြီး ဘီယာလေးပါ ပါသွားတာပေါ့
နည်းနည်းစိတ်သက်သာရာ ရသွားပြီဆိုတော့မှ ဆိုင်ထဲကနေ ထွက်လာပြီ ဆိုင်ကယ်ရှိရာကို လာခဲ့တယ်… အိမ်ကိုပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ပါ… တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ချက်ခြင်းဆိုသလိုကို မိုးတွေချိန်းလာပြီးတော့ လျှပ်စီးတွေလက်လာပါလေရော… အဲဒီအချိန်လေးကတော့ ည ၈ နာရီ ကျော်ကျော်လေးပေါ့
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဆိုင်ကယ်အမြန်မောင်းပြီး အိမ်ကိုအပြေးပြန်ပေမယ့် လမ်းထိပ်မရောက်ခင်မှာပဲ မိုးတွေ အသည်းအသန်ကို တခါတည်း ရွာချပါတော့တယ်… လမ်းထိပ်က တိပ်ဆိပ်ပြီး လူခြေတိတ်နေတဲ့ တိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုရဲ့ အမိုးအောက်ကို ဆိုင်ကယ်ထိုးရပ်ပြီး အပြေးဝင်မိတာပေါ့… ဆိုင်ကယ်ရပ်ရင်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ အခန်းတွေကို လူတွေမှ ပြန်ရောက်ပါလေစ… အားလုံးက တိတ်ဆိတ်ခြင်းအတိ
ဇာတ်လမ်းက အဲဒီကနေ စတော့တာပါပဲ…
ကျနော်ဆိုင်ကယ်ထိုးရပ်မိတဲ့ နေရာရဲ့ ဘေးခန်းက ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ရင်းနှီးနေတဲ့ အစ်ကိုကြီးတယောက်ပေါ့… သူ့မှာ မိန်းမနဲ့ ကလေး သုံးယောက်ရှိတယ်… ကျနော်လည်း မိုးကလည်းအေး လုပ်စရာလည်း မရှိတာနဲ့ ဆေးလိပ်ဘူးကိုထုတ်ပြီး မီးဖွာညှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့… အစ်ကိုကြီးနေတဲ့ အခန်းရဲ့ အခန်းတံခါးက ပွင့်လာခဲ့တယ်…
ကျနော်လည်း တိတ်ဆိပ်နေတဲ့ နေရာမှာ တံခါးဖွင့်သံကြားတော့ လှည့်ကြည့်မိတာပေါ့… အဲဒီမှာ အခုဏက အစ်ကိုကြီးက အပေါ်ပိုင်းဗလာကြီးနဲ့ ညအိပ်ဝတ် ဘောင်းဘီတိုကို ၀တ်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်… ကျနော်လည်း အမှတ်တမဲ့နဲ့ သူ့ရဲ့ ထွားထွားကျိုင်းကျိုင်း (အများပြောတဲ့စကားနဲ့ ပြောရရင် ယောက်ျားစစ်စစ် ပီပီသသပေါ့ဗျာ) ခန္ဓာကိုယ်ကို မှင်သက်ပြီး ငေးကြည့်မိသွားတယ်…
ကျနော်မိုးကာအောက်မှာ မလုံတလုံ ရပ်နေတာကို တွေ့သွားတယ် ထင်တာပဲ… သူ့အခန်းမှာ ၀င်လာထိုင်နိုင်ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်… ကျနော်လည်း သူ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ သွားထိုင်မိတာပေါ့… အဲဒီမှာပဲ စကားစပြောမိကြတယ်… သူ့မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေက ရုပ်ရှင်သွားကြလို့ ပြန်မရောက်သေးတဲ့အကြောင်း… သူက အလုပ်ကနေ ဂျူတီဝင်နေရလို့ မလိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း စသဖြင့်ပေါ့
လူချင်းကလည်း မစိမ်းဘူး မြင်ဖူးနေကြဆိုတော့ ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ သူနဲ့ ကျနော် အဖွဲ့ကျသွားတယ်လေ… သူ့ရဲ့အလုပ်အကိုင် ကိစ္စတွေ ပြောကြ… အဲဒီမှာပဲ ကျနော်လည်း ကျနော့်ရဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ အလုပ်အကြောင်းတွေ ဆွေးနွေးကြပေါ့… စကားပြောရင်း နှစ်ယောက်သား တော်တော်လေးအဖွဲ့ကြနေကြတယ်
စကားပြောရင်း ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုရောက်လာမှန်း မသိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု သူမေးလာခဲ့တယ်… ညီလေးက ရည်းစားရှိပြီလားတဲ့… တစ်ခါမှ တွဲသွားတွဲလာ လုပ်နေတာ မတွေ့မိလို့ မေးကြည့်တာပါတဲ့… ကျနော်ကလည်း မဆိုင်းမတွပါပဲ ရည်းစားဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုး ကိုဆိုလိုတာလဲလို့ပေါ့… အဲဒါနဲ့ သူက အော် ညီလေးချစ်တဲ့ ကောင်မလေး ရှိပြီလားလို့ မေးတာပါတဲ့… ကျနော်လည်း သူ့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ကျနော်က မိန်းကလေး မကြိုက်ဘူးအစ်ကိုလို့ ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းကိုပဲ ကြိုက်တာပါလို့ ပြောလိုက်မိတယ်…
သူက တစ်ချက်တော့ မျက်နှာမှင်တက်သွားတယ်… ပြီးတော့ ခဏတိတ်ဆိတ်သွားတယ်… ကျနော်ကပဲ စကားစပေးလိုက်ပါတယ်… အစ်ကို ကျနော့်ကို ဘယ်လိုထင်မြင်လို့လဲပေါ့… သူကပြောပါတယ်… အစ်ကိုမမြင်တတ်ဘူးတဲ့… အစ်ကိုက မိသားစုရှိတယ်ပေါ့နော်… ပြီးတော့ သူ့မိသားစုရဲ့ အကြောင်းကို သူပြောပြပါတယ် ကျနော့်ကို
အဲဒီအချိန်မှာပဲ မိုးကလည်းတိတ်လို့ ဖွဲဖွဲလေးတွေပဲ ကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်သူ့ကို နှုတ်ဆက် ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်… ဆိုင်ကယ်ကို အပြင်းမောင်းပြီး အခန်းထဲရောက်တဲ့အထိ ကျနော်နှုတ်ခမ်းက ပြုံးနေဆဲဆိုတာကို ကျနော် မှန်ကြည့်လိုက်တော့ တွေ့လိုက်ရတယ်… ကျနော် သူနဲ့ စကားပြောရတာ ပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်
ဒီလိုနဲ့ ဒီအဖြစ်ပျက်ပြီး နှစ်ပတ်လောက် အကြာမှာတော့ ကျနော်လည်း အလုပ်မှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြန်အဆင်ပြေလာတယ်… အလုပ်သွား အိမ်ပြန်နဲ့ပဲ အချိန်တွေကို တယောက်တည်း ကုန်ဆုံးရင် အထီးကျန် ရက်ရှည်တွေကို ကျနော် ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်… ကျနော်အဖော်တွေက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ စာအုပ်နဲ့ ကွန်ပျူတာပဲပေါ့… ကျနော် ပျင်းလာတဲ့အချိန်ဆိုရင် အင်တာနက်ပေါ်တက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောတယ်… ရုပ်ရှင်ကြည့် စားလိုက် သောက်လိုက်နဲ့ပဲပေါ့
တစ်ရက်တော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အိမ်နဲ့သိပ်မဝေးတဲ့ စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာ မုန့်ဝယ်နေတုန်း အစ်ကိုကြီးနဲ့ ကျနော် ပြန်ဆုံခဲ့တယ်… သူ ကျနော့်ကို မြင်တာနဲ့ ပြုံးပြပါတယ်… တကယ်ပြောတာပါ ကျနော် ရင်ခုန်သွားတယ်… ဒါပေမယ့် အသိစိတ်ထဲကနေ သူ့မှာ မိသားစု ရှိတယ်… ပြီးတော့ သူဟာ ကျနော့်ကို ဘယ်လိုမှ ရည်းစားတယောက်လို သဘောထား ချစ်နိုင်မယ့်သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကျနော် နားလည်လက်ခံထားပြီးသားလေ
အဲဒီမှာ သူက နေကောင်းလား ဘာတွေလာဝယ်တာလဲ ဘာညာနဲ့ နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီး ကျနော့်ဆီကနေ ဖုန်းနံပတ် တောင်းခဲ့တယ်… ကျနော်လည်း ကျနော့်ဖုန်းနံပတ်ကို ပေးခဲ့ပါတယ်… သူ့ဖုန်းနံပတ်တော့ ကျနော်တောင်းဖို့ နှုတ်က ဆွံ့အနေတဲ့အတွက် မတောင်းလိုက်မိဘူး..
သုံးပတ်မြောက်တဲ့အချိန် ညနေခင်းမှာ ကျနော့်ဆီကို ဖုန်းတစ်ခု ဆက်လာခဲ့တယ်… အစ်ကိုကြီးပေါ့… ကျနော် မမျှော်လင့်ထားပေမယ့် အရမ်းကို ပျော်ရွှင်သွားခဲ့တယ်… သူက ဖုန်းဆက်ပြီး ဒီညနေ အားရင် အတူတူသောက်ရအောင်ဆိုပြီး ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်… ကျနော်လည်း တယောက်တည်းသမား ငြင်းဆန်နေစရာ အကြောင်းမရှိခဲ့ဘူးလေ… လာခဲ့မယ်လို့ ဂတိပေးလိုက်တယ်…
ချိန်းထားတဲ့အချိန် နောက်ကျမှာစိုးလို့ ရေကိုမြန်မြန်ချိုးပြီး အ၀တ်အစားကို တစ်ခါမှ ရွေးချယ်မ၀တ်တတ်တဲ့ ကျနော်က လေးငါးစုံလောက်ကို မှန်ရှေ့မှာ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် ၀တ်ကြည့်မိတဲ့အထိပါ… အ၀တ်အစားလဲပြီးလို့ သွားတော့မယ်လုပ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ဆီရောက်မှ ကျနော့်ဆိုင်ကယ် ဘီးပေါက်နေတာကို သိလိုက်ရတယ်… ကျနော် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ… ကျနော့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ စိတ်ကလေးတွေ ရုတ်ချည်း ပျောက်ဆုံးသွားသလိုပဲ
ကျနော် အစ်ကိုကြီးဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်… ဆိုင်ကယ်ဘီးပေါက်နေလို့ မလာနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းပေါ့… သူက မမျှော်လင့်ပဲ ကျနော့်အခန်းဝအထိ လာကြိုတယ်… ကျနော် ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်လိုက်မလဲ… အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော် သူ့မှာ ကာမပိုင် မိသားစု ရှိတယ်ဆိုတာကို မေ့နေခဲ့တယ်… ကျနော် အမှောင်ဖုံးလွှမ်းသွားတာလား
သူ့နဲ့အတူ ဆိုင်ကယ်စီးသွားရတာကို ကျနော် ရင်ခုန်နေခဲ့တယ်… ကျနော် ဘ၀မှ တစ်ခါမှ မခံစားဖူးတဲ့ ရင်ခုန်မှုတစ်ခုကို ခံစားနေရတယ်… ကျနော် ဘာတွေဖြစ်နေမှန်း ကျနော် မသိတော့ဘူး… အခုချိန်မှာ ကျနော်သိတာ တစ်ခုကတော့ ကျနော်ပျော်နေတယ်
ဆိုင်ကိုရောက်လို့ ဘီယာတွေသောက် စကားတွေ ပြောကြရင်း ကျနော်တို့တွေ ရင်းနှီးသထက် ရင်းနှီးသွားတယ်… တစ်ခါတစ်လေ ကျနော် သူ့ရဲ့ မျက်လုံးတည့်တည့်ထဲကို စူးစိုက်ပြီး ကြည့်မိခဲ့တယ်… သူ့မျက်လုံးတွေက ပကတိ ရိုးသားခင်မင်ဖော်ရွေ တတ်တာကလွဲလို့ ဘာမှ ကျနော်မတွေ့ခဲ့ရဘူး… အဲလိုအချိန်မျိုးမှာ ကျနော် ရှက်စိတ် သိမ်ငယ်သလို ခံစားရတဲ့စိတ်တွေ ၀င်လာခဲ့တယ်… သူ့အပေါ်မှာ ထားတဲ့ ကျနော် စိတ်ကို ကျနော် ပြင်ဖို့ သတိပြန်ရတယ်
အဲလိုနဲ့ပဲ ကျနော်နဲ့ အစ်ကိုကြီးတဲ့ တစ်ပတ်တစ်ခါတော့ တွေ့ဖြစ်ကြရင်း ကျနော်လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့အိမ်မှာ ၀င်ထွက်လည်ပတ်ရင်း သူ့မိသားစုလေးနဲ့ပါ ရင်းနှီးလာခဲ့တယ်… ကျနော့်ကို သူတို့မိသားစုတစ်စုလုံးက အရမ်းကို ချစ်ကြတယ်… ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ အစ်ကိုကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင် နှလုံးသားလေးက ရင်ခုန်တုန်းပဲပေါ့… ကျနော့်စိတ်ကို ကျနော် ထိန်းသိမ်းပြီး နေခဲ့ပါတယ်… ကျနော် ကိုကြီးကို သဘောကျနေတာ ကိုကြီး မသိအောင်ပေါ့… ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ကိုကြီးက ကာမပိုင် မိသားစုနဲ့လေ… ပြီးတော့ ကျနော့်ကို တကယ့်ညီလေးတယောက်လို မိသားစုဝင်တယောက်လို ကောင်းရှာတာလေ
တစ်ရက်ပေါ့… ကျနော် လုံးဝကို မမျှော်လင့်ထားတဲ့တစ်ရက်ပေါ့
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် နယူးရီးယားည… အစ်ကိုကြီးတို့အိမ်မှာ အသားကင်စားကြ သောက်ကြစားကြရင်း လူတွေ စည်ကားနေခဲ့တယ်… ကျနော်လည်း တယောက်အပါအ၀င်ပေါ့… အားလုံး ပျော်ရွှင်နေကြတယ်… ကျနော်ကတော့ အသားကင်တဲ့နေရာမှာ ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးရင်း စားလိုက်သောက်လိုက်ပေါ့… အစ်ကိုကြီးက သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဖွဲ့ကြလိုက် အသားကင်ယူလိုက် ရယ်လိုက် မောလိုက်နဲ့ ရှုတ်ယှက်ကို ခတ်နေတာပါပဲ… အစ်ကိုကြီး တော်တော်ပျော်နေခဲ့တယ်
အဲဒီညမှာ အစ်ကိုကြီးရဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေ မရှိကြဘူး… သူတို့ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားအိမ်ကို ပြန်ကြတယ်… ကိုကြီးက ဘာဖြစ်လို့ ကျန်နေခဲ့မှန်းလည်း ကျနော် မမေးမိတော့ ကျနော် မသိလိုက်ဘူး… ကိုကြီးဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ ကျနော်က ရောက်လာတာလေ
သောက်ရင်း စားရင်း ပျော်ရင်း ပြောကြဆိုကြ ရယ်မောကြရင်းနဲ့ နယားရီးယား အော်ဟစ်သံတွေလည်း တိတ်ဆိတ်လို့ လူတွေလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြန်ကုန်ကြပြီ… ကျနော်က ကျနော်နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား မိသားစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ကူသိမ်းပေးရင်းနဲ့ လုပ်နေတာပေါ့… အားလုံးဘယ်သူမှ မရှိကြတော့ဘူး အဲဒီမှာ… ကိုကြီး ကျနော့်ဆီကို လာခဲ့တယ်… မပြောမဆို ကျနော်ကို နောက်ကနေ သိုင်းပြီး ဖက်ထားလိုက်တယ်… ပြီးတော့ ကျနော့်ကို ဆွဲဖက်ပြီး ကျနော့်နှုတ်ခမ်းကို တစိုက်မတ်မတ် နမ်းခဲ့တယ်… ကျနော် တော်တော်လေး ရင်ခုန်သွားတယ်…
ဒါပေမယ့် ချက်ခြင်းပဲ ကျနော် တော်တော်လေး စိုးရိမ်သွားခဲ့တယ်… ကိုကြီးက မိသားစုရှိတယ်… ကျနော် အဲလိုလုပ်လို့မရဘူး… ကျနော် ရုန်းထွက်ခဲ့တယ်… ပြီးတော့ ကျနော် ကိုကြီးကို အံ့သြတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်နေမိတယ်… ကိုကြီး မူးနေလားမသိဘူး… ကျနော်မြင်တာ ကိုကြီးမမူးသေးဘူး… ဒါပေမယ့် ကိုကြီး ကျနော့်ကို ပြန်ကြည့်နေခဲ့တယ်… အဲဒီအကြည့်ထဲမှာ ကျနော် တစ်ခုခု တွေ့လိုက်သလိုပဲ…
ဟင့်အင်း… မဖြစ်ရဘူး… အဲလိုမဖြစ်ရဘူး… ကိုကြီးက ကာမပိုင်နဲ့လေ… ဟာ… ကျနော် ထွက်ပေါက်မရှိဘူး… ကျနော် ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်… ကျနော် မဖြစ်နိုင်ဘူး… ကျနော် သူတပါးရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို မဖျက်ဆီးနိုင်ဘူး… ကိုကြီးဖက်က ဘယ်လိုသဘောထားမှန်း မသိပေမယ့် ကျနော် ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်… ကိုကြီးက ဘယ်လိုလူလဲ… ကျနော့်ကို အထင်သေးလို့လား…
ကျနော် ကိုကြီးကို ချစ်တယ်… အရမ်းချစ်တယ်… ကျနော့်ရဲ့ အချစ်ကိုတော့ မစော်ကားပါနဲ့ ကိုကြီးရယ်
ဒါပေမယ့် အခုတော့… ဟိုး အဝေးဆုံး… အဝေးဆုံးအထိပေါ့…………….
I don’t like your article and attitude at all. Shouldn’t encourage such kind of article!!!!!!!!!!!!
You are able to stand on your right but don’t persuade to real guys in MG and around your area.
That’s Homophobia… It is Sickness !!!
လာပြန်ပြီ ………တစခန်းထပြန်ပြီ ။ ဖတ်မိတာ ငါ့အမှားပဲ ။
ဟားဟားဟား… အဲဒါကြောင့် တမင်တကာကို တွတ်ပစ်ပြောင်းပြီး ရေးထားတာ… ဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ… သိပ်မကောင်းဘူးထင်ရပေမယ့် အဲဒါ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ တကယ်ရှိတယ်ဗျ… မရှိပဲနဲ့ ရေးစရာလားနော့
အခြောက်မ တဗျာထဲဗျာမနေနဲ့ ရှင်လို့သုံးပြီးရေးလေ
အဲဒါလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူးဗျ… ရှင်တို့ ခင်ဗျားတို့ဆိုတာ သတ်မှတ်ချက်တွေပါ… ကျနော့်အတွက်တော့ အဲဒီသတ်မှတ်ချက်က အရေးမကြီးလှဘူးဗျ… မန္တလေးသူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျနော်လို့ပြောကြတာ ကြားဖူးလားမသိ… အဲဒါဆိုရင်ရော သူတို့တွေကို ရှင် လို့ပြောလို့ သွားပြောခိုင်းကြည့်ပါလား…
ပြီးတော့ နောက်တစ်ခု… အခြောက်မ ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့… အဲဒီစကားလုံးတစ်လုံးက ဘယ်လောက်အထိ အရေးကြီးသလဲဆိုတာ သိလားမသိဘူး… လူတယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို အဲဒီလိုမျိုး စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ သတ်လို့ရတယ်ဗျ… power of world တဲ့… အခုလိုမျိုး အခြောက်မ လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ခေါ်လိုက်တဲ့လူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မုန်းတီးမှုတွေ အထင်သေးမှုတွေ ခွဲခြားနှိပ်ချဆက်ဆံချင်တဲ့အရာတွေ အများကြီးပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ သိသာနေတယ်လေ… အဲဒါဆိုကတည်းက လူအချင်းချင်း ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံခြင်းပဲပေါ့…
ဒီစကားလုံးတစ်လုံးကို ဘာမှနားမလည် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှု မရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ခေါ်ကြည့်ပါလား… သူဘယ်လောက်ရှက်သွားမလဲ… ဘယ်လောက်ကြောက်သွားမလဲ…
အဲဒါကြောင့် ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ် ခေါ်တာက အရေးမကြီးဘူး… ဒါပေမယ့် အဲဒီခေါ်လိုက်တဲ့ စကားလုံးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ လူအချင်းချင်း ခွဲခြားနှိပ်ချ စော်ကားတာတွေ ပါလာရင် ဒါဟာ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တာပါပဲ…
လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားလိုက်နာတဲ့ ဂေဇက်ရွာမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလေးတွေကိုလည်း သတိထားရင်တော့ ကောင်းမှာပေါ့
ခင်ဗျားက ဖတ်မိတာ မှားတာမဟုတ်ဘူး..
အပုပ်နံ့ ရလို့ ကြည့်လိုက်တော့..
Men to Men ပဲ အဲလိုမျိုးတွေ တကယ်ရှိပင်မဲ့ လုံးဝခံစားလို့မရဘူး ခြောက်စရာရှိလဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့ …
အခုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲလေဗျာ… ဘယ်သူက ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး ဖြစ်နေလို့လဲ…
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လို့ပြောတာက အပြင်အဆင်က အစအကုန်လုံးကိုပါပြောတာပါ .. အခုဟာက ပထမက ချစ်သူမရှိဘူးလို့လားလို့ အမေးခံရတယ်ဆိုတော့ ဒါ ယောကျာင်္းလေး အယောင်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်မှာပေါ့ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား …
အဲဒီပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီးက ဘာကို ကြိုက်တတ်တာလဲ…
တစ်ကယ် မမိုက်လို့ကတော့ ကိုက်ချိုးပစ်မယ်… ( ကတ်ကျေးနဲ့)
ပေါ်တင်ခြောက်လွန်းတော့လည်း စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကြည့်မကောင်းဘူးဗျို့ ။
စာအရေးအသားကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလူမျိုးတွေ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ရှိနေလည်း မဖြစ်သင့်တာက မဖြစ်သင့်တာပါပဲ။
အလုပ်ထဲမှာ ထိုင်ရင်း ဂေဇက်ရွာထဲကို ၀င်ရင်းနဲ့ ရေးချင်လာလို့ ကောက်ရေးလိုက်တာ… အလုပ်လည်း ရှုပ်နေတာ… ဒါပေမယ့် ရေးချင်စိတ်လေးကလည်း ၀င်နေတော့ လုပ်လိုက် ရေးလိုက်နဲ့ ဟီးဟီး အဆင်တော့ မချောဘူးပေါ့… ဒါပေမယ့် အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်း အစ်ကို အစ်မတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝေဖန်ပိုင်းခြား ပေးတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထုတ်ဖော်ခွင့်ရတဲ့အတွက် တော်တော်လေး ကျေနပ်မိပါတယ်… ချီးယားစ်
မင်းက ချီးယားစ်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး..
လိုအပ်ရင် ကိုယ် ကူညီပေးမယ်..
နောက်တစ်ခါ မ ယားနိုင်တော့အောင်..
စာလဲ ဖတ်လိုပြီးကော ဟိုက် ဆိုပြီး နှဖူးပေါ်လက် နဲ့ တချက်ရိုက် လိုက်မိတယ်
ပြောပြန်ရင် လဲအခွင့် အရေးဆိုတာ ကြီးနဲ့ ကိုင်ပေါက်နေဦးမယ် အဲဒီတော့ နောက်တခါ အဲဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာ တင်မယ်ဆိုရင် ခေါင်းစဥ်းဘေးနားမှား (gay များသာဖတ်ရန်ဆိုပြီး) တင်ပေးပါလို့ (ကိုယ်နဲမဆိုင်ဘူးမှန်းသိရင်ကျော်ဖတ်လိုရအောင်) မောင်ရင်ပု ကတော့ သူ ပါတနာနဲ ဒီရွာထဲကရွာသာ တွေနဲ့တိုက်ပွဲ ၀င်ဖို ဆုံးဖြတ်ထားတယ်နဲ့ တူတယ်
အဘပုက ဘယ်တုန်းက အဲလိုဖြစ်သွားတာလဲ ………
ကျွန်တော်လည်း ဖတ်မိသူ တစ်ယောက် ဆိုတော့ နည်းနည်းလောက် ရေးဦးမယ် ဗျာ ။ ဖြိုး ဆိုတဲ့ တစ်ယောက် ကို အင်တာဗျူးချင်တာပါ ။ အခုခေတ် က ယပလက်ပြန် ခေတ် ရောက်နေပြီဆိုတော့ ။ ဖြိုး ဟာ အခြောက် တစ်ယောက် ဆိုရင် ယပလက် ကို သွားခဲ့ပြီး ပြီလား ။ ယပလက် ကို မသွားရသေးရင်တော့ အထက်ပါ ရေးထားသလို လိုက်မန်းနေရင် မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။ တစ်ကယ်လို့ ယပလက် က ပြန်လာပြီး ဆိုရင်တော့ ဖြိုးအနေ နဲ့ စပွန်ဆာ ကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ် ဆိုရင် ဖြိုးလိုချင်တဲ့ ယောက်ျား ပုံစံ မျိုး ကို မကြာခဏ ဆိုသလို ရရှိနိုင်ပါတယ် ။ ယနေ့ ခေတ် မန်းတလေး မှာ ယပလက်ပြန်များ ကို လည်း မကြာခဏ စားသုံးလေ့ရှိသူ ယောက်ျားများ ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖြိုး အား ပိုက်ဆံသာ များများ ရှာထားပါ လို့ လမ်းလေးညွှန်လိုက်ချင်ပါတယ် ဗျာ ။
Firstly I have to make it clear that I dislike homosexuality but I do not hate homosexual person for they also are human being.
You said “That’s Homophobia… It is Sickness !!”
You cannot label the people who hate or dislike homosexuality as homophobia. As you think you have the right, they also havearight to dislike it.
You can practice what you like until and unless it does not disturb other people’s faith or practice. However, some private matters should not be public. In that case, it is annoying. I am sorry to let you know that your post made me annoyed.
If you want to write the post on gay matter, please be frank. Just mention that “Gays only” after the post as Noob suggested. အဲဒီတော့ နောက်တခါ အဲဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာ တင်မယ်ဆိုရင် ခေါင်းစဥ်းဘေးနားမှား (gay များသာဖတ်ရန်ဆိုပြီး) တင်ပေးပါလို့ (ကိုယ်နဲမဆိုင်ဘူးမှန်းသိရင်ကျော်ဖတ်လိုရအောင်)
မန္တလေးသူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျနော်လို့ပြောကြတာ ကြားဖူးလားမသိ… အဲဒါဆိုရင်ရော သူတို့တွေကို ရှင် လို့ပြောလို့ သွားပြောခိုင်းကြည့်ပါလား…
You cannot blame girls from Mandalay for using “ကျနော်”. They are using “ကျနော်” because of traditional upbringing, not because of homosexuality. You should appreciate the difference.
I hope you will be able to makealine between your right and that of other people.
တခုတော့သိချင်တယ် …. ဆေးပညာရှုဒေါင့်ကနေရှင်းပြချက်နဲ့ စိတ်ပညာရှုဒေါင့်ကနေ တခုခုပြော
ဆေးပညာ ရှုဒေါင့်က ကြည့်ရင်တော့..
AIDS ဖြစ်မှာပေါ့… အဲဒါ သေချာပါတယ်..
စိတ်ပညာ ရှုဒေါင့်က ကြည့်ရင်တော့… စိတ်ရောဂါပါ..
အဲလိုပဲ သူလည်း.. ကျားမပြည့်တာခေါ်တယ်..
ခင်ဗျား ရန်ကင်းစင်တာမှာနေတဲ့ ဖြိုးဆိုတဲ့လူလား…..နာမည်ချင်းဆင်နေလို.မေးကြည့်တာ….လူအခွင့်အရေး
နဲ. အခြောက်အခွင့်အရေးဘာမှမဆိုင်ဝူးနဲ.တူတယ်……………လူအခွင့်အရေး လူအခွင့်အရေး
လျှောက်လျှောက်မပြောနဲ. ……အဲဒီစကားလုံးကအမ်မတန် တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလုံး…………..ဒီလိုနေရာမျိူး
လူ့အခွင့်အရေးတို့ နိုင်ငံရေးတို့ဆိုတာက တခြားနေရာကနေ ယူလာတာ မဟုတ်ပါဘူး… ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ ဓူဝ လှုပ်ရှားသွားလာ နေထိုင် စားသောက် ပြောဆိုဆက်ဆံ လုပ်ကိုင်နေတာတွေ အားလုံးဟာ လူ့အခွင့်အရေးတွေ နိုင်ငံရေးတွေပဲပေါ့… ကျနော်အနေနဲ့ အနူးအညွတ် တောင်းပန်ချင်တာ တစ်ခုက ကျနော်ရေးတဲ့ ကွန်မင်းတွေက အရမ်းကို တတ်သိလွန်းလို့ ဆရာကြီးလုပ်ချင်လွန်းလို့ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး… ကျနော်လည်း ကျနော်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တာလေးကို ကျနော့်အမြင်လေးတွေကို ချပြကြည့်တာပါ… ပြီးတော့ ကျနော်က အလုပ်ထဲကနေ အလုပ်လုပ်လိုက် ဖတ်ပြီးတော့ ကွန်မင်းပေးလိုက်ဆိုတော့ နည်းနည်းပါးပါးတော့ လေသံမာနေသလို တချို့ဖြစ်နေတယ်… အဲဒီအတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ကျနော်ယုံကြည်တာက ကျနော်ပေးတဲ့ ကွန်မင်းတွေကို ကျနော် အားလုံးတာဝန်ယူနိုင်တယ်… ကျနော် အချက်အလက် မရှိပဲ ဘာမှမပြောဘူး… အလဟသ လူတွေကို ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတိုင်း လိုက်ရန်းနေတာ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရန်းနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ… အားလုံးနဲ့လည်း ခင်မင်ချင်ပါတယ်…
ဘုန်းကြီးများအားပင့်ဖိတ်ပြီး ကမ္မ၀ါဖတ်တာကြုံဘူးကြမည် ထင်ပါသည်
ဘုန်းကြီးက မေးပါတယ် “သင်တို့အိမ်၊ခြံ ထဲမှာ လူအများကို ခြောက်လှန့်တတ်တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးများရှိတာကို လိုလားသလား၊မရှိတာကိုလိုလားသလား”လို့ မေးရင် အားလုံးက မရှိတာကို လိုလားတဲ့အတွက် “မရှိတာကိုလိုလားပါတယ်ဘုရား”လို့ ပြန်ဖြေရင် ဘုန်းဘုန်းက အားလုံးကမလိုလားတဲ့အတွက် ဒီအိမ်၊ခြံ ထဲမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ မနေရဆိုပြီး နှင်ထုတ်ပါတယ်
မကောင်းဆိုးဝါးတွေလဲ သူ့ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်အရ နေချင်တဲ့နေရမှာ နေခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ အားလုံးကမလိုလားရင်တော့ သူနဲ့သင့်တော်တဲ့နေရာ(သူတို့ကိုလက်ခံတဲ့ အားပေးတဲ့နေရာ)ကိုသွားရတာပါပဲ လက်ခံခွင့် ငြင်းပယ်ခွင့်ဆိုတာလဲ လူတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးပါ
အပေါ်က ပို့စ်ကို လက်မခံသူများ + ပေးပါ ၊ လက်ခံသူကြိုက်သူများ — ပေးပါ
+ များနေရင် ဒီဆိုက်ထဲမှာ အခြောက်ကိစ္စတွေ လုံးဝမရေးပါနဲ့ (အများစုကသဘောမကျပါဘူး)
— များနေရင် ကြိုက်သလိုသာရေးပါ လုံးဝ ဝေဖန် ကန့်ကွက်တာ မလုပ်ပါဘူး
ပျော်စရာတော့ အကောင်းသား… ကျနော့်အတွက် ဒီဂေဇက်ရွာလေးထဲမှာ လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်လေး အသိအမြင်တွေ လူတွေရဲ့ သဘောထားတွေကို အများကြီး ရလိုက်ပါတယ်… ခွန်အားလည်းရပါတယ်… အခြောက်တွေကို မုန်းတီးတဲ့လူတွေ တော်တော်များလေ အခြောက်တွေအတွက် ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်တာကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက လုပ်ပေးဖို့အတွက် ခွန်အားတွေ ပိုရှိလာလေပေါ့… ချီးယားစ်
ဘီလို ကြီးလဲ…. ဒါတွေလည်းရှိတာလား
ခုမှ ဒီဆိုဒ်ထဲရောက်တယ်.. အလန်လေးနဲ့ တန်းတွေ့တာပဲ..
ကိုယ်မင်းကို မဖြားယောင်းခဲ့ရပါဘူး ဖြိုးရယ်..
မင်းသာ လိုက်ခဲ့မယ်ဆို ကိုယ်ကခေါ်မှာပေါ့…
အင်းလေ.. မင်းလည်း ရောက်ဖူးတဲ့အခါ တမလွန်လောကမှာ ပျော်သွားမှာပါ…
လိုက်ခဲ့တော့ဖြိုးရေ… ကိုယ်လည်း မင်းလိုပဲ… ယောက်ျားတွေကို စိတ်ဝင်စားရာက
AIDS နဲ့ပေါ့… ခုတော့ တမလွန်မှာနေတယ်..
မင်းကိုလည်း ခေါ်မယ်.. အခု လိုက်ခဲ့….
လိင်တူချစ်သူတွေဆိုတာက ကမ္ဘာ့လူ့ဦးရေ ရာခိုင်းနှုန်းရဲ့ ဆယ်ပုံပုံမှ တစ်ပုံစာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်… အဲဒီထဲမှာ HIV/Aids ရောဂါသည်တွေဦးရေရဲ့ ဆယ်ပုံပုံမှ တစ်ပုံဟာလည်း လိင်တူချစ်သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်… အဲဒီတော့ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် HIV/Aids ရောဂါဟာ ဘယ်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်များတာလည်း ဆိုတာထင်သာ မြင်သာရှိပါတယ်… လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆာဗေးတွေ သုတေသနတွေ လုပ်ထားတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်တွေ စာအုပ်စာပေတွေ ကျနော့်မှာ ရှိပါတယ်… HIV/Aids ရောဂါဆိုတာက လိင်တူချစ်သူမှ ကူးစက်ရရှိတာမဟုတ်ပါဘူး… ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ အသိပညာနည်းပါးမယ်၊ အကာအကွယ်မသုံးမိတာ စသဖြင့်ပေါ့ အဲလိုမျိုးဆိုရင် ဘယ်သူမဆို ကူးနိုင်တာပါပဲ… အဲဒါ လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ရောဂါမှမဟုတ်တာ… အဲဒီရောဂါသာ လိင်တူချစ်လို့ ရတဲ့ရောဂါဆိုရင် ရနေတဲ့သူတွေ အားလုံးက လိင်တူချစ်သူတွေချည်းပဲပေါ့…
နောက်ပြီးတော့လေ ကျနော့် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ Straight သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးပဲ… သူတို့တွေ တစ်ခါမှ လိင်တူချစ်တာကို အဲဒီလောက်အထိ ခါးခါးသီးသီး မုန်းတီးပြောဆိုနေတာမျိုး မရှိဖူးဘူး… အဲဒါကြောင့် ကျနော် အံ့သြမိတာက အခု ဒီထဲက လူတွေတော်တော်များများက လိင်တူအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် တော်တော်လေးကို ခါးခါးသီးသီး ဖြစ်နေကြတာကိုလေ…
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အများအားဖြင့် အားနာတတ်ပါတယ်။
အားမနာ လျှာမကျိုးပဲ သူများအိမ်ပေါ်တက်ပြီး ကိုယ့်ယောက်ျားကို
မြူဆွယ်ဖို့ လုပ်နေတာတွေ့ရင်တော့ သည်းခံမှာမဟုတ်ဘူး။
Nice fri… :D :D :D :D
ဒီ လောက်ဆိုရင် MG မှာဂေး ကိုလက်မ ခံနိုင်ကြတာ ကိုသဘောပေါက်လောက် ပြီလို့ထင်ပါတယ် ။ Homosexuality ကို ကိုယ်တိုင်လဲလက်ခံနိုင် တဲ့အဆင့် မရောက်သေးပါဘူး ဒါပေမဲ့ လူသားတယောက် အနေနဲ့လူ့ပါတ်ဝန်းအသိုင်းအဝိုင်း ကနေ လုံးဝ ပြစ်ပယ် ရှုံ့ချ ဖို့တော့ မသင့်ဘူး လို့ထင်ပါတယ် ။ သူငယ်ချင်း ထဲမှာလဲ gay နဲ့lesbian တွေရှိပါတယ် ။ ကိုယ်ကို တိုင်ကဒီလို မဟုတ်တော့ ထပ်တူခံစား နိုင်ဖို့ဆို တာမဖြစ်နိုင်ဘူး လေ ။ ဒါကြောင့် gay literature ကိုရေးချင် ရင်တော့ တခြားနေရာ သွားရေးရ လိမ့် မယ်ထင်တယ် ။ ဂေးနဲ့မဆိုင်တဲ့တခြား ပို့စ နဲ့ ကွန်မန့် ဆိုရင်တော့ ရွာသားတွေ လက် ခံနိုင် မယ်လို့ ထင်ပါ တယ် ။gay ပဲဖြစ်ဖြစ် straight ပဲဖြစ်ဖြစ် အပြုသဘော ဆိုရင် လူတိုင်းလက် ခံမှာပါ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် positive attitude ထားပြီး ကြမ်းတန်း တဲ့ ရှေ့လမ်းခရီး ကိုဆက်ရှောက် နိုင် ဖို့….
ကျွန်တော်က လူပျိုလူလွတ မိန်းမလည်းမရှိ ကလေးလည်းမရှိ။ ဖြီုး မငြင်းလောက်ဘူးထင်တယ်။ ဟီဟီး
ကျွန်တော်က လူပျိုလူလွတ် မိန်းမလည်းမရှိ ကလေးလည်းမရှိ။ ဖြီုး မငြင်းလောက်ဘူးထင်တယ်။ ဟီဟီး
( ကျနော့်ကို ဆွဲဖက်ပြီး ကျနော့်နှုတ်ခမ်းကို တစိုက်မတ်မတ် နမ်းခဲ့တယ် )
ကြည့်ချင် ကိုယ်ဟာကိုယ်ကြည့်ပေါ့.. ဘာတုန်း..သူများဟာ..သွားကြည့်နေ..
အင်း… homo နဲ့ straight တွေရဲ့ အမြင်ကတော့ မတူတာတွေ များတဲ့အတွက် ငြင်းခုန်သံတွေတော့ ထွက်လာဦးမှာပဲ…
ကဲ.. ရွာသူား ဖြိုးရေ..(ရွာသူနဲ့..ရွာသားကိုပေါင်းပြီး.. ရွာသူားလို့ခေါ်မယ်..)
ရွာထဲဖြစ်နေကြတာ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ..။ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းက.. ဂေးတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာ လက်မခံနိုင်သေးဘူး..။
ဆန်ဖရန်မှာ… Harvey Bernard Milk (May 22, 1930 – November 27, 1978) ဆိုတဲ့.. နိုင်ငံရေးသမားတယောက်က …သူများက.. လုပ်ကြံခံရတဲ့အထိကို …အတင်းတွန်းလုပ်သွားခဲ့တာ…။
ပြောရရင်..မြန်မာတွေကတော့.. ဒီလောက်အထိ… တုံ့ပြန်တာဆိုးမယ်မထင်ပါဘူး..။
အရင်က..စည်းကမ်းအတိုင်း…. Society & Lifestyle > Gay/Lesbian အောက်မှာ ဂေးနဲ့ဆိုင်တာတွေကို… တင်ပါ.။
( အခြောက်ပေမဲ့ခပ်စွာစွာ အခြောက်လေးထင်ပါတယ် )
စီးခြင်းထိုးနေတာကိုး :D :D :D